Isantelovolana Fileovana – Fit. Paris 18&19 janoary 2020
Teny faneva isantelovolana Fileovana Paris «Loharano moboiboika ho fiainana mandrakizay» Jao. 4:14 Ry havana malala, Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA PARIS, atao ny Sabotsy sy Alahady 18-19 janoary 2020 ho avy izao, ao amin’ny FLM Paris. Toerana: Sabotsy: 7 rue de Poitiers, 75007 Paris Alahady: 7 rue Marie Rose, …
I3V Fileovana – Fit. Paris 28&29 septambra 2019
Teny faneva isantelovolana Fileovana Paris « … Efa nanisy soa ahy Andriamanitra, ka manam-be aho… » Gen. 33:11b Ry havana malala, Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA PARIS, atao ny Sabotsy sy Alahady 28-29 septambra 2019 ho avy izao, ao amin’ny FLM Paris. Toerana: Sabotsy: 7 rue de Poitiers, 75007 …